နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ကျောက်ပန်းတောင်း မင်းမဲ့စရိုက် ဖြစ်ရပ်...! - Thadin
[ April 20, 2019 ] တာလေမိုင်းလင်း ဆရာတော်၏ ထူးဆန်းသော ပဒူကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း ထူးဆန်းထွေလာ
[ April 20, 2019 ] ၀ါးထရံအိမ်လေးနေရာမှ အာစီ ၁ ထပ်တိုက်ကြီးနဲ့ ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ “””လှိမ့်ဝင် တည်သုံး””” ယတြာက ကျွန်တော်စခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ…! KNOWLEDGE
[ April 20, 2019 ] ပုဏ္ဏကတိုက်နေတဲ့အိမ်ကမီးတိုက်နေသူ အာဠာဝကဘီလူးအား ဖမ်းဆီး ( ရုပ်သံ ) NEWS
HomeNEWSနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ကျောက်ပန်းတောင်း မင်းမဲ့စရိုက် ဖြစ်ရပ်…!
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ကျောက်ပန်းတောင်း မင်းမဲ့စရိုက် ဖြစ်ရပ်…!
April 17, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ကျောက်ပန်းတောင်း မင်းမဲ့စရိုက် ဖြစ်ရပ်…!
မလုပ်သင့် အဖြစ်သင့် တဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ယူဆပါသည်။ မိမိပျော်ရွှင်ဖို့ အတွက် အများသူငါ တွေကို အသုံးချ နှောက်ယှက်ခြင်း သက်သက်ပါ။ခရီးသွားပြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျေးတောသား သူရ အကောင့်ပိုင်ရှင်မှ တွေ့ကြုံခံစား ခဲ့ရတာတွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ တင်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်..။
သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကိုလည်း အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့လည်း တင်ပြထားပါတယ်။အခုလို အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုးကို နောက်ထပ်မဖြစ်ပေါ်စေရန် တာဝန်ရှိတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးများမှ အခုလို လုပ်ရပ်မျိုးကို ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှ ကြက်ပြစ်ကျေးရွာသားအချို့ အလွန်မိုက်ရိုင်းသည် ****
ဒီနေ့ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ မကွေးကနေ စဉ့်ကိုင်အပြန် လက်ပံပျားအကျော် ကြက်ပြစ်ရွာ အရောက် ရေပက်သည်ဆိုသော အရက်မူးနေသော လူတစ်စု ကားလမ်းပေါ် ပစ္စည်းများဖြင့် ပိတ်ဆို့ လမ်းပိတ်၍ ကားများအား အဓမ္မရပ်ခိုင်းပြီးး စက်မရပ်သည့် အတွက် ကားအား ဂဲဖြင့်ထု
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးသို့ ဖုန်းဆက်၍လည်းကောင်း လက်ပံပျားနယ်မြေရဲစခန်း စခန်းမှူးသို့ လည်းကောင်း ဖုန်းဆက်၍ ယင်းဖြစ်စဉ်အား အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုင်တန်းခဲ့သည်။
ယင်းသို့ အများပြည်သူသွားလာရာ လမ်းပေါ်အထိ မူးယစ်သောက်စား ပိတ်ဆို့ ရမ်းကား မင်းမဲ့စရိုက် ဆန်နေခြင်းအားး ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အရေးယူပေးပါရန့်
Source – ကျေးတောသား သူရ
မလုပျသငျ့ အဖွဈသငျ့ တဲ့ လုပျရပျလို့ ယူဆပါသညျ။ မိမိပြျောရှငျဖို့ အတှကျ အမြားသူငါ တှကေို အသုံးခြ နှောကျယှကျခွငျး သကျသကျပါ။
ခရီးသှားပွညျသူတဈယောကျဖွဈတဲ့ ကြေးတောသား သူရ အကောငျ့ပိုငျရှငျမှ တှကွေုံ့ခံစား ခဲ့ရတာတှကေို လူမှုကှနျယကျမှာ တငျပွထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ..။
သကျဆိုငျရာတာဝနျရှိသူမြားကိုလညျး အရေးယူဆောငျရှကျနိုငျရနျ ဖုနျးဆကျအကွောငျးကွားခဲ့တယျလို့လညျး တငျပွထားပါတယျ။
အခုလို အလားတူဖွဈရပျမြိုးကို နောကျထပျမဖွဈပျေါစရေနျ တာဝနျရှိတဲ့ သကျဆိုငျရာ လူကွီးမြားမှ အခုလို လုပျရပျမြိုးကို ထိရောကျစှာ အရေးယူဆောငျရှကျသငျ့ပါကွောငျး မြှဝပေေးလိုကျပါသညျ။
ကြောကျပနျးတောငျးမွို့နယျအတှငျးမှ ကွကျပွဈကြေးရှာသားအခြို့ အလှနျမိုကျရိုငျးသညျ ****
ဒီနေ့ နှဈဆနျးတဈရကျနေ့ မကှေးကနေ စဉျ့ကိုငျအပွနျ လကျပံပြားအကြျော ကွကျပွဈရှာ အရောကျ ရပေကျသညျဆိုသော အရကျမူးနသေော လူတဈစု ကားလမျးပျေါ ပစ်စညျးမြားဖွငျ့ ပိတျဆို့ လမျးပိတျ၍ ကားမြားအား အဓမ်မရပျခိုငျးပွီး စကျမရပျသညျ့ အတှကျ ကားအား ဂဲဖွငျ့ထု
ကြောကျပနျးတောငျးမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးသို့ ဖုနျးဆကျ၍လညျးကောငျး လကျပံပြားနယျမွရေဲစခနျး စခနျးမှူးသို့ လညျးကောငျး ဖုနျးဆကျ၍ ယငျးဖွဈစဉျအား အရေးယူဆောငျရှကျပေးရနျ တိုငျတနျးခဲ့သညျ။
ယငျးသို့ အမြားပွညျသူသှားလာရာ လမျးပျေါအထိ မူးယဈသောကျစား ပိတျဆို့ ရမျးကား မငျးမဲ့စရိုကျ ဆနျနခွေငျးအား ကြောကျပနျးတောငျးမွို့နယျ ရဲတပျဖှဲ့မှ အရေးယူပေးပါရနျ့
Source – ကြေးတောသား သူရ
မနက်အိပ်ယာနိုးနိုးချင်း လုံးဝ လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာများ…!
အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းတယ်ဆိုတာ ငွေကြေးချမ်းသာသူတစ်ယောက်ကို ခင်ပွန်းတော်ထားရတာမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ကိုနွေးထွေးကြင်နာ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးတတ်သူကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတာပါ…!
This Month : 33177
This Year : 174634
Total Users : 533658
Total views : 2414030